I-Deco Ribbon Craft Ribbon Curler Shredder: Konke mayelana nama-ribbon shredders
Dinga usizo? Oxhumana naye Ukwesekwa Kwamakhasimende
Amavidiyo Womhlahlandlela Wokugoqa Isipho
I-Deco Ribbon Craft Ribbon Curler Shredder
Ikhaya/Akunazigaba/I-Deco Ribbon Craft Ribbon Curler Shredder
Iyini i-Ribbon Shredder?
I-Ribbon shredder iyithuluzi lokusika nokugoqa elibamba isakhiwo esilula esenziwe ngepulasitiki. Iqukethe umugqa wamazinyo ensimbi noma epulasitiki abekwe emhlathini ongenhla ukuze aklebhule iribhoni ngokwesidingo sakho.. Umhlathi ongezansi uthatha umumo wembobo futhi kulindeleke ukuthi wamukele umgcini we-sprint. I i-ribbon shredder inamagama ahlukene ezimakethe ezahlukene. Lokhu kungase kwaziwe nangokuthi umsiki weribhoni, iribhoni shredding ithuluzi, iribhoni mini slitting umshini, i-ribbon stripper, i-ribbon curler, i-curler, iribhoni mini slitting ithuluzi, iribhoni shredder ithuluzi noma i i-ribbon slitter.
Izinhlobo ezahlukene zama-Ribbon Shredders atholakala eMakethe
Kube nokuhlukahluka okuningi okwengezwe kuleli thuluzi elihle kakhulu. Ngenxa yalokho, ifike emakethe ngezindlela ezahlukene. Bangu amaribhoni shredders namazinyo ensimbi emhlathini ongenhla futhi futhi ama-ribbon splitters ngamazinyo epulasitiki. Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi leli qoqo le Ama-Ribbon shredders inweba ize ifike emaceleni akabili i-ribbon shredder ngethuluzi lokugoqa, i-ribbon slitter, I-Ribbon shredder curler futhi, i-ribbon shredder paper cutter nokunye okuningi.
Okuningi mayelana nama-ribbon shredders
Leli thuluzi elenziwe umuntu lihloselwe ukwenza izinto zibe lula ekuphileni. Ikakhulukazi uma ubhekene nama-curls amaribhoni angcolile. Uma unquma ukusika noma ukugoqa iribhoni usebenzisa isikelo, kuzokuthatha amahora ukuqeda isifundo. Izinto sezilula kakhulu ngalokhu okumangalisayo i-ribbon shredder lapho kufanele umane udonse inani elidingekayo leribhoni ngokusebenzisa ithuluzi. Umphumela umane uyamangalisa. Leli thuluzi lingasetshenziswa ukufeza izinjongo ezihlukene njengokugoqa izipho kanye nemihlobiso yephathi kusetshenziswa iribhoni eklebhuliwe.
Leli thuluzi eliwusizo nokho likusiza ukuthi uhlukanise futhi usonge iribhoni ngokudonsa nje okulula. Awudingi ukuvakashela noma yiziphi izipho ezisongayo zabahlobisi bephathi ukuze wenze umsebenzi weribhoni wenziwe. Leli thuluzi likhuthaza ukugoqa izipho ze-DIY kanye nemihlobiso yeribhoni yabantu.
Itholakala ngemibala nezitayela ezahlukene
Leli thuluzi elilula liza ngemibala ehlukahlukene kanye nezitayela emakethe. I-pallet yokuklama ihlanganisa uhlangothi olulodwa, emaceleni lakabili, amazinyo ensimbi noma epulasitiki. Kufanele kuqashelwe ukuthi noma yiziphi zalezi zitayela zinga-odwa okungenani 4 inhlanganisela yombala kumklamo ngamunye. Yenza umdlalo wakho weribhoni ube namandla futhi uhehe ngaleli thuluzi elimangalisayo.
Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi 2 amamodeli amasha kulindeleke ukuthi afike emakethe maduze nje. Lawa mamodeli athuthukile asesesigabeni sokuthuthuka futhi kulindeleke ukuthi abe nezinketho ezintsha ezinhle ezingaba usizo ngempela
Izici ezimangalisayo nezinzuzo zaleli thuluzi elilula
Leli thuluzi likusiza ukuthi udale izipho ezimangalisayo neziyingqayizivele kakhulu. Leli thuluzi alidli isikhala esiningi futhi isisindo silula kunalokho okulindele. Ungakwazi ukumane ufake leli thuluzi ephaketheni lakho noma esikhwameni sakho ukuze uliphathe nomaphi lapho uya khona. Isethi emangalisayo yamazinyo emhlathini ongenhla ikusiza ukuthi udonse iribhoni ngaphandle kokuhlupheka okuningi. Le divayisi ingase ibe usizo ngesikhathi sikaKhisimusi. Ungasebenzisa lokhu ukuhlobisa izipho zikaKhisimusi ngokusebenzisa i-bounce kanye ne-curling ribbon effect. Ungakwazi futhi ukudala ama-shreds akhangayo kumaphakheji esipho. Leli thuluzi elilula linezinjongo eziningi. Kufanele kuqashelwe ukuthi ungamane uhlukanise iribhoni ube yizintambo zebhaluni usebenzisa leli thuluzi futhi ulisebenzisele usuku olukhethekile lokuzalwa noma umcimbi wephathi yomshado.. Joyina izandla nomholi wemakethe ukuze ujabulele ubuhle bomsebenzi weribhoni omangalisayo.
I-RSPAC- Umholi ku-Ribbon Shredders
I-RSPAC ihamba phambili emakethe ekukhiqizeni nasekukhangiseni okusezingeni eliphezulu Ama-Ribbon Shredders. Ikhasimende likhetha lolu hlobo kunezinye ngenxa yokusebenza ngempumelelo komkhiqizo eliwenzayo. Awukwazi ngisho nokucabanga ukufanisa ukubukeka okutholayo esiphweni sakho ngokusebenzisa le milingo ama-ribbon shredders. Bangabaholi bemakethe kulesi sigaba somkhiqizo 94% ukwabelana emakethe. Lona umkhiqizo ofanele ukuba nawo endlini yakho. Isizukulwane esidala sishintsha kancane kancane kulezi ama-ribbon shredders ezindleleni zendabuko asebezilandele amashumi eminyaka.
Imihlobiso yekhwalithi ephezulu ngenani eliphansi
Sezadlula izinsuku lapho bekufanele uchithe imali eningi emihlobiso yezipho kanye nobunye iribhoni obubandakanya ubuciko. I ama-curlers we-ribbon shredder iza ngaphansi kwegama lomkhiqizo we-RSPAC, yenza ukuphila kube lula kubasebenzisi beribhoni laphaya. Ama-curls amaribhoni anikeza ukubukeka okusha nokuyingqayizivele kokuqhekeka nemicu yeribhoni. Ungapakisha izipho zakho ngezindleko ezilula. Ikhwalithi yamathuluzi iqinisekiswe yi-RSPAC. Engeza ubukhazikhazi nombala kumcimbi wakho usebenzisa i i-ribbon shredder ekhiqizwa futhi imakethwa yi-RSPAC.
Wonke umuntu uthanda ukwaziswa okuthrendayo kwakamuva ekugoqweni kwezipho neminye imihlobiso yosuku lokuzalwa. Lokhu kuhlobene kakhulu namabhaluni okuhlobisa amaphathi akhethekile okuzalwa. Kufanele baguqule ukunaka kwabo kulo mkhiqizo ukuze benze okungalungiseki. Ungenza ama-bounce nama-curls usebenzisa iribhoni njengokucaciswa kwakho kumasekhondi ambalwa nje. Lawa mathuluzi ewodwa angasetshenziswa ukwenza izikhwama zephepha izimbali kanye nokugoqa usebenzisa iribhoni.
I-RSPAC ikunikeza inqwaba yezinketho futhi ngayinye yalezi zinketho izokunikeza okukhiphayo okuyingqayizivele nokungenakuqhathaniswa. Ikhasimende lingahlala lithembele kumathuluzi athengiswa ngaphansi komkhiqizo we-RSPAC. Bangamathrenda abantu abathanda ukuqhubeka namathrendi akamuva. Bathembela kakhulu ekukhangiseni “kwezwi lomlomo” lapho ikhasimende lincoma umkhiqizo okungenani wabathengi abangaba ababili noma abathathu.. Lolu wuhlobo lokuthandwa abalutholile eminyakeni edlule.
Umsebenzi wakho weribhoni ungaphenduka ube ubuciko obumangalisayo ngemizuzwana embalwa. Konke okudingayo a i-ribbon shredder kanye nezandla ezihlukene zokwenza umlingo. Engeza imibala nemihlobiso ekuphileni usebenzisa lokhu okumangalisayo I-Ribbon Shredder ekhiqizwa futhi imakethwa yi-RSPAC.
Ngu Charles Wong|Julayi 18, 2017|Akunazigaba|Amazwana Avaliwe ku I-Deco Ribbon Craft Ribbon Curler Shredder
Share This Story, Khetha Inkundla Yakho!
Mayelana Nombhali: Charles Wong
6 Okufanele Ube Namathuluzi Nezinto Zokusebenza Zokugoqa Isipho sikaKhisimusi 2019
""KULULA UKUSEBENZISA"" I-Ribbon Shredder
Imibono Yokugoqa Isipho: Uzigoqa Kanjani Izipho Zakho Kulo Khisimuzi
Izithombe ezivela ku-Pinterest
Amaribhoni ePoly & I-Bows Factory
Liyini ithuluzi le-Ribbon Shredding?
Disemba 17, 2016
Ungalisebenzisa Kanjani I-Ribbon Shredder ne-Curler Tool?
Indlela Yokwenza Amaribhoni Aqonde & Khonza nge-Ribbon Shredder kanye ne-Curler?
Novemba 1st, 2018
Awekho amazwana ashicilelwe okwamanje.
Kwakamuva Kusuka ku-Twitter
Tweets by I-HonstarRibbon
Thola imibono ukuze udale iminsalo emihle yomcimbi okhethekile. Bhalisela iphephandaba lethu.
I-Holdsun Industrial Co., Ltd.
Cha. 188, Bengjiangwei, I-Shishuikou Village, Idolobha laseQiaotou, I-Dongguan, Isifunda sase-Guangdong, China
ph: +86 769 8252 1007 | I-imeyili: [email protected]
I-copyright 2022 I-RSPAC™ (I-Ribbon Shredder yokupakisha izipho) | Wonke Amalungelo Agodliwe | Powered by D & C